आम मानिसमा रहेको गर्भावस्थाबारे यो ८ भ्रम हटाएकै राम्रो | Rajmarga
आम मानिसमा रहेको गर्भावस्थाबारे यो ८ भ्रम हटाएकै राम्रो
गर्भावस्थामा के गर्न हुने, के गर्न नहुने ? के खाने र के नखाने ? यस्ता विषयमा मान्छेपिच्छे फरक–फरक धारणा पाइन्छ । जसका कारण गर्भवती महिला नै यसबारे अन्योलमा हुन्छन् । गर्भावस्थामा गर्ने व्यवहारबारे यति धेरै सल्लाह हुन्छ कि स्वयं गर्भवती नै सत्यबारे अन्योल हुन्छन् । यस्तो छ गर्भावस्थाबारे ८ भ्रम :
डा.रेणु जैन, प्रसूति कन्सलटेन्ट
गर्भवती महिलाको पेटको आकारका आधारमा शिशु छोरा वा छोरी भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । गर्भवती महिलाको पेट झुकेको भए छोरा र त्यस्तो नभए छोरी हुन्छ ।
गर्भवती महिलाको पेट ठूलो वा सानो हुने कुरा उसको पेटको मांसपेशी र आकारमा भर पर्छ । या कतिऔँ बच्चा हो भन्ने कुराले पनि यसको निर्धारण गर्छ । यदि पहिलोपटक गर्भ रहेको हो भने तुलनात्मक रूपमा पेट सानो हुन्छ र दोस्रोपटक हो भने अलि ठूलो ।
गर्भावस्थाका वेला आमाको मुहारमा चमक छ वा छैन भन्नेले छोरा वा छोरी के हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि गर्भवती आमाको मुहारमा चमक भए छोरी नत्र छोरा हुन्छ ।
प्रायः गर्भवती आमाको दोस्रो टाइमेस्टरपछि उसको मुहारको चमक बढ्दै जान्छ । दोस्रो टाइमेस्टरपछि गर्भवती आमालाई बिहानको दुखाइ कम हुँदै जान्छ । जसकारण साबिकभन्दा अलि बढी खाना पनि रुच्ने गर्दछ । यसले आमाको रक्तसञ्चारलाई पनि सन्तुलित र चुस्त बनाउँछ । जसकारण आमाको अनुहारमा चमक बढ्दै जान्छ ।
गर्भावस्थामा शारीरिक सम्पर्क राख्दा निकै पीडा हुन्छ ।
सामान्य अवस्थामा शारीरिक सम्पर्क राखेजस्तै गर्भावस्थामा राख्दा पनि त्यतिकै सुरक्षित हुन्छ । चिकित्सकले नरोकेसम्म शारीरिक सम्पर्क राख्दा कुनै फरक पर्दैन । झन्झट नलागेमा बच्चा जन्माउने अन्तिम महिनासम्म पनि शारीरिक सम्पर्क राख्दा हुन्छ ।
शिशुलाई पोषण नपुगेमा गर्भवती आमालाई बिहानको समयमा दुखाइ हुन्छ ।
गर्भ रहेको सेमेस्टरसम्म प्रायः गर्भवती आमालाई बिहानको दुखाइ हुन्छ । हरेक बिहान हुने बमिटिङले बच्चालाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्छ । गर्भ रहनुभन्दा पहिला स्वस्थकर भएको आमाको पछि पनि तीव्र गतिमा तौल घट्दैन । बढी नै दुखाइ भएमा चिकित्सककहाँ जानुपर्दछ ।
गर्भ रहेका वेला शारीरिक सम्बन्ध राख्दा बच्चालाई चोट पुग्ने गर्छ ।
गर्भ रहेपछि शारीरिक सम्पर्क राख्दा पनि बच्चालाई कुनै असर पुग्दैन । किनभने गर्भमा रहेको बच्चालाई एब्डोमनल वाल र एम्निआँटिकले सुरक्षित रखेको हुन्छ । त्यसैले शारीरिक सम्पर्क राख्दा पनि इन्फेक्सन बच्चासम्म पुग्न पाउँदैन । तर, आमालाई ब्लिडिङ भएको अवस्थामा, लेबर पेन सुरु भएमा भने शारीरिक सम्पर्क राख्नु हुँदैन ।
शारीरिक व्यायामले शिशुलाई हानि पु¥याउँछ ।
यदि महिलाले कहिल्यै शारीरिक व्यायाम नगरेको भए तापनि गर्भावस्थामा भने व्यायाम गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, अप्ठ्यारो खालको व्यायामचाहिँ गर्नु हुँदैन । आमाले आफ्नो स्वास्थ्यसँगै तनाव घटाउनका लागि पनि व्यायाम गर्न जरुरी हुन्छ ।
गर्भवती आमाले हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन ।
डेलिभरी हुन करिब ६ हप्ता बाँकी रहँदासम्म जुनसुकै समयमा पनि हवाई यात्रा गर्न सकिन्छ । हवाई यात्राले शिशुलाई कुनै असर पु¥याउँदैन ।
गर्भवती आमाले कहिल्यै कफी पिउनु हुँदैन ।
गर्भावस्थाका वेला कम मात्रामा कफी पिउँदा भने शिशुलाई कुनै हानि पु¥याउँदैन । तर, दिनमा तीन कपभन्दा बढी कफी पिउँदा भने हानिकारक हुन सक्छ । यदि गर्भवती आमामा कफिनको मात्रा बढी भएमा जन्मिने शिशुको तौल कम हुन सक्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: युवतीहरुले एक रातमा कति पटक शारिरिक सम्पर्क राख्न सक्छन् ? यस्तो छ अनुसन्धान
Next post: सबै यातायात समिति खारेजीको तयारी, अब यसरी हुन्छ दर्ता